HALKAN KA AQRISO W/W MOGTIMES DAILY NEWS PAPER 22 FEB 2021
Monday February 22, 2021 - 11:02:18 in Wararka by Super Admin
Villa Somaliya oo war kasoo saartay shirkii Shalay
Madaxtooyada Somaliya ayaa goor dhoweyd war-murtiyeed kasoo saartay shirkii uu Shalay guddoomiyey madaxweynaha waq tigiisu dham aaday, Maxamed C/hi Farmaajo, ka asi oo ay ka qeyb-gal een Madaxda D/G/yada Galmudug, Hirshabeelle, K/Galbeed iyo guddoomiyaha G/Ba naadir. Shirka ayaa sidoo kale waxa qeyb ka ahaa R/wasaaraha xil-gaarsiinta, Maxamed Xus een Ro oble, waxaana goobjoog ka ahaa Wakiil ada Bee sha caalamka oo uu hogaaminayo er geyga Q/ Midoobay ee Soomaaliya, James Swan, waxaa na looga hadlay is-mari-waaga do orashada.
"Madaxweynaha JFS Md.Maxamed C/hi Far maajo ayaa guddoomiyey Kulan hordhac u ah Shirka Wadatashiga Qaran ee ku saabsan dhaq an-gelinta talo-soojeedintii Guddiga Farsamada Arrimaha Doorashooyinka Federaalka,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Sidoo kale waxa qoraalka kasoo baxay Villa Somalia lagu sheegay in shirkaas diirada lagu saaray ‘xal u helidda caqabadaha soo wajahay fulinta Heshiiska 17-ka Sebteembar’, ayada oo la isku raacay in talo soo jeedintii guddiga ay soo afjartay kala aragti duwanaanshihii ku aad danaa dhaqan gelinta heshiiska doorashada, ta as oo ka turjumeysa hor u socodka iyo dimu qraadiyadda dalkeenna.
"Madaxweyne Farmaajo ayaa xusay dadaal ladii heer Federaal iyo Dolwad Goboleed ee loo qaaday horumarinta dowladnimada, adkeynta midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo xaqiijin ta xasilloonida siyaasadeed iyo amni ee dalka.” ayaa ugu dambeyntiina lagu yiri qoraalka Villa Somalia.
Shirka Shalay ayaa waxa uu hordhac u yah ay kulankii uu hore u iclaamiyay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday kaasi oo uu iskugu yeer ay madaxda dowladda iyo kuwa D/G/yada, isla markaana ku taariikheysnaa 18-ka ilaa 19-ka bi shan. Waxaa weli dalka ka taagan xiisada ka dhalatay doorashada, gaar ahaan caasimada oo ay si weyn iskugu hayaan madaxda dowla dda ee waqtigoodu dhamaaday iyo Musharaxiin ta mucaaridka ee u tartamaya xilka madaxwe ynaha.
DF oo xaqiijisay in Deni iyo A/Madoobe ‘ays an aqbalin’ casumaddii FARMAAJO
D/Soomaaliya ayaa shaacisay in madaxw eynayaasha Puntland iyo Jubaland aysan weli aqbalin casuumaddii uu u fidiyey madaxweyna ha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaali ya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, si ay Muqdi sho uga qeyb galaan wada-hadallada ku saabs an doorashada.
Qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Soomaaliya ayaa lagu yiri "Dhammaan madaxda maa mul goboleedyada, marka laga ree bo labo, waxay ka jawaabeen caas uumaddii ma daxweynaha, waxayna diyaar u yihiin inay tagee raan heshiiskii gudd iga farsamada [ee Baydha ba]”.Caasimada Onl ine ayaa fahamsan in 2da madaxweyne ay yih iin Axmed Madoobe iyo Saci id Deni, maadaa ma 3-damadax goboleed ee ka le ay soo ga areen M/Muqdisho. "Mar kale, DFS waxay ku boorineysa labada madaxweyne gobole ed ee harsan inay kusoo biiraan saxiixayaasha kale ee heshiiskii siyaasadeed ee September 17, si taasi ay dhabbaha ugu xaarto doorasho ay ku jirto danta nabadeed iyo barwaaqada,” ay aa la gu yiri qoraalka. Ma cadda sababta aysan Ax med Madoobe iyo Saciid Deni u aqbalin casuu madda Farmaa jo, hase yeeshee waxaa la rum eysan in ka dib weerarkii ay ciidamada dowlad da ku qaadeen musharaxiinta mucaaradka iyo dibad-baxayaal ay dib uga gurteen shirka Muqd isho.
Jubaland ayaa qoraal ay soo saartay kadib we erarkaas si weyn ugu dhalleeceysay DF, halka Puntland ay soo saartay qoraal u muuqday inay xaaladda dhex-dhexaad ka tahay.
DF oo u digtay dalal qoraallo ‘marin habaab in ah’ kasoo saaray rabshadihi Muqdisho
Dowladda Soomaaliya ayaa u digtay dalal ay sheegtay inay qoraallo marin habaabin ah ka soo saareen dhacdooyinkii Muqdi sho ka dhacay Jimcihii ee ciidama da dowladda iyo mudaahar adayaal ay hormuud u ahaayeen qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka. Qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibe dda ayaa lagu yiri "dowladda federaalka wa xay soo dhoweyneysaa walaaca ay muujiyeen dalal ka aan walaalo nahay iyo urur goboleedya da ay Soomaaliya xubinta ka tahay, kuwaas oo soo saaray qoraallo la xiriira is-mari waaga siyaasa deed ee ka taagan hirgelinta doorashooyinka, qoraalla daas oo waafaqsan mowqifka DFS”
Qoraalka ayaa intaas ku daray in DFS ay garowsan tahay baahida loo qabo in doorasho laga qabto dalka, sidaas darteedna ay ka tana asushay arrimo badan oo ay isku hayeen dow lad goboleedyada, kuwaas oo ay ka mid aheyd doroasho qof iyo cod ah, si loo gaaro heshiiskii September 17.
"Nasiib darro, ayada oo uu jiro heshiiskaas, iyo rabitaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay wax uga qabaneyso walaacyada jira, saam eynta quwado shisheeye ayaa weli caqabad ku ah in lasoo geba-gebeeyo heshiis dhabbaha u xaaraya doorashada,” ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibedda.
Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in ka hor shirka la qorsheeyey inuu Muqdisho ku dhe x-maro madaxda dowladda federaalkka iyo mad ax goboleedyada, ay musharaxiinta madaxwey ne "doorteen ay carqaladeeyaan hanaanka, si ay u raadsadaan waddo sharci darro ah iyo kac doon hubeysan oo lagu qarinayo dibad-bax nab adeed, oo lagu damaanad qaaday dastuurka.”
"Waxaan, sidaas darteed, cambaareeneynaa, oo aan ka digeynaa qoraallada marin-habaabin ta ah ee iska indha tiraya xaqiiqaha mararka qa arna u muuqda inay taageerayaan kacdoonka rabshadeysan, kuwaas oo ka imanaya meelaha qaar, ee aan ognahay ficillada xun ee ay ka wa daan gobolka, si been ahna isaga dhigaya inay mas’uul ka yihiin mustaqbalka dal kale, si ka hor -imanaysa mabaadi’da iyo xeerarka caalamiga ah,” ayaa lagu yiri qoraalka.
JUBALAND oo soo saartay 5 Qodob oo xasa asi ah – "Farmaajo waa inuu ka dhex baxaa hanaanka doorashada”
D/Goboleedka Jubaland ayaa Shalay war-sa xaafadeed xasaasi ah kasoo saaray is-mari-wa aga doorashada iyo rabshadihii u dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho, xili uu dhamaday mu ddo xileedkii madaxweynaha iyo hay’adda das tuuriga ah ee dowladda.
Jubbaland ayaa waxay sheegtay inay si mug leh u fahamsan tahay muhiimada ay leedahay in dalka ka qabsoomto doorasho wada-ogol ah, oo ku saleysan hufnaan, xor iyo xalaal na ah, islamarkaana ay dadaal badan ka same ysay sidii heshiis rasmi ah looga gaari lahaa hanaanka doorashada.
"Xalinta cabashooyinkaas ayuu Madaxweyn aha D/G/Jubbaland, Md.Axmed Maxamed Isla am u tagay M/Dhuusamareeb, ugana qeyb qaa ty shirkii halkaas kadhacay Febraayo 2-6 ee Dhuusamareeb-4, kaaso nasiib darro madaxw eynaha federaalka kasoo tegay iyadoonan xal la gaarin,” ayaa lagu yiri qoraalka. Waxay sheeg tay inay tanaasul badan u sameysay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka doora shada, waxa yna sheegtay inay M/Baydhabo u dirtay xubn ah eeda uga mid noqonayey xubnaha Guddiga Far samada ee loo xil saarey inay ka shaqeeyaan turxaan bixinta iyo xal u helida cab ashooyin kaas kor ku xusan ee ka dhashay he shiiskii 17-Sept ember ee lagu gaaray Muqdisho.
Jubbaland ayaa DF ku eedeysay inay qaa day ta llaabooyin gurracan oo xoog sheegasho ah, ku waasi oo aan waafaqsaneyn sharciga, isla mar kaana waxyeelo u geysatay muwaadin iin gudan ayay xaqooda dastuuriga, midaasi oo wiiqeysa dadaaladii doorashada, sida lagu yiri qoraalka.
D/G/Jubbaland ayaa ugu dambeyntiina ku ba aq day 5-qoddob, ayada oo dalbatay in mada xwey naha waqtigiisu dhamaaday inuu ka dhex baxo oo uusan door ku yeelan hanaanka door ashooy inka, si bey yiraahdeen loo helo kals oonida dha mmaan saamileyda siyaasada ee dalka.
1. DF ee xiligeedu dhamaaday inay garowsho & raalli-gelin ka bixiso tallaabooyinka gurracan iyo waxyeelada ay u geysatay muwaadiniinta iyo sa amileyda siyaasadeed ee dalka.
2. In la isugu yimaado shir ay kasoo qayb gelay aan dhamaan saamlleyda siyaasaded ee dalka.
3. In goobta uu shirkaas ka dhacayo noqoto go ob amnigeedu lagu kalsoonaan karo, mas’uuli yadeeduna lahaato beesha caalamka.
4. In la helo damaanad-qaad ku aadan fulinta natiijada shirkaas.. In Madaxweynuhu Federaal ka ee waqtigiisu dhamaaday ka dhex baxo oo uusan door ku yee lan hannaanka doorashooyin ka, si loo helo kal soonida dhamaan saamileyda siyaasadeed”
Baarlamaanka carabta oo ka ambaqaadaya sida uu u taageerayo amniga iyo xasiloonida So omaaliya iyo Ilaalinta qarannimada iyo bedqab ka dhuleed ee Soomaaliya iyo inuu dunida tag eero ugu helo sidii Soomaaliya u gaari laheyd horumar iyo xasilooni ayaa waxaa uu:
Waxaa uu soo dhoweynayaa cas uumaadda Madaxweyna ha JFSMd.Maxamed C/hi Far maajo ee qabshada shir wadatashi si loo helo xal wadar ogol ah, oo xoojinaya amniga iyo xa siloonida dalka, qeybna ka noqonaya in la gaaro heshiis meesha ka saara caqbadaha ku hor gu dban diyaarinta doorasho guud, si loo xaqiijiyo rabitaanka Shacabka Soomaaliyeed ee helitaan ka nolol, amni iyo horumar.
Waxaa uu ugu baaqayaa dhinacyada kala du wa ee jamhuuriyadda iney qeyb ka noqdaan wa dahadallada, hormariyaanna maslaxadda guud ee shacabka si loo gaaro midnimo qaran oo do orasho lagu qabto sida ugu dhaqsoyaha badan.
Waxaa uuna ugu baaqayaa jaamacada carabta iyo beesha caalamka iney taageeraan dib u he shiisiin qaran oo lagu soo afjarayo dhibaatooyin ka hortaagan diyaarinta doorashooyinka.
Waxaa uu cambaareynayaa weeraradii argigi xiso ee ka dhacday caasimadda Muqdisho 1-3dii February 2021 kuwaas oo uu dhaawac iyo dhimasho kaso gaareen dad badan, waxay ad keyneysaa sida ay Soomaaliya ugu garab ta agan tahay la dagaalanka argigixi sada, kuna ta ageereyo talaabo kasta oo looga hortagayo ko oxahaas ka shaqeeya fawdada iyo burburka.
Waxaa uu ugu baaqayaa jaamacad carabta iyo beesha caalamka in Soomaaliya ku gacan qa btaan sidii ay cagta u saari laheyd horumar iyo bar waaqo, waxaa kale oo uu ku baaqayaa in la jooj iyo fa ragelin kasta oo dibadda oo ku aa ddan ar rima ha gudaha ee Somaliya, lana taage ero qar anni nada Soomaaliya ee dhul, bad & hawada ee ka dhanka ah qabsashada gumeysataha cusub.
Deni oo shaaciyey ‘arrimo qarsanaa oo uu si cad ugu sheegay’ Farmaajo
Madaxweynaha Puntland Saciid C/hi Deni oo Xalay shir jaraa’id ku qabtay M/Garowe ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed dalka, isagoo shaaca ka qaaday arrimo badan oo xasaasi ah oo uu Farmaajo qorsheynayo.
Saciid Deni ayaa madaxweyna ha muddo xileedkiisa dhamm aaday Farmaajo ku eedeeyey wax kasta oo dib u dhac iyo khi laaf ku keenay doorashada Soomaaliya, isagoo mid mid u dul istaagay qodobada uu ku eedeyn ayo Farmaajo.
Deni ayaa ku eedeeyey in Farmaajo uusan rabin doorasho sax ah oo dalka ka dhacda, ee mar waliba sameynayey wax aan macquul aha yn si waqtiga loo dhammeeyo, markii ugu dan beysayna uu ku dhegay M/Garbahaarey.
Madaxweynaha Puntland ayaa wax lala yaa bo ku tilmaamay in madaxweyne Farmaajo oo xalka Garbahareey laga waayey loo sii daba fa dhiyo xaaladda dalka Soomaaliya oo dhan. Si doo kale Saciid Deni ayaa sheegay in madaxw eyne Farmaajo uu u sheegay in beeshiisu ay san ka yeeleyn in G/Gedo uu ku wareejiyo Juba land.
Waxa uu sheegay in Farmaajo uu si cad ugu sheegay inuu dalka xoog ku maamulayo, islama rkaana Hawiye qeylinaya, sida uu hadalka u dhi gay, aysan waxba ka qaadi karin "sababtoo ah wuxuu haystaa ciidan.”
Madaxweynaha Puntland waxa uu intaas ku daray in Farmaajo ay dad kasoo jeeda Hawiye ay kala shaqeynayaan sidii uu dalka xoog ugu maamuli lahaa, ayna halistu tahay inuu dalku ka rido dagaal sokeeye.
"Markii aan Xamar tagnay wuxuu Farmaajo nagu qabsaday aniga iyo Axmed Madoobe max aad ula kulanteen siyaasiyiinta iyo odayaasha Hawiye,” ayuu yiri Sacid Deni.
Sidoo kale waxa uu sheegay inuu ku dacwee yey masuul kasta oo ku heyb ah, balse qaark ood uu kala kulmay eedeyn ah inuu kala saftay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Saciid Deni ayaa sidoo kale shaaciyey in Far maajo uu dhisay ciidamo isaga u daacad ah si da Haramcad iyo Gorgor, oo aan marna dagaal la gelin Al-Shabaab balse uu isagu adeegsado, ayna weerarro ka fuliyeen Galmudug, Gedo iyo Daljirka Dahsoon oo Muqdisho ah.
Deni ayaa ugu dambeyn sheegay in dalka uu halis ugu jiro inuu dagaal sokeeye ku laabto, iya doo beesha caalamka aanay wax badan kala so con, islamarkaana Puntland aanay qeyb ka noq on doonin halista Farmaajo, sida uu yiri.
Midowga Musharaxiinta oo qoraal xasaasi ah u diray Golaha Ammaanka QM
Midowga Musharrixiinta ayaa warqad ay u dir een Madaxweynaha Golaha Amniga ee Q/Mido obay, Marwo Dame Barbara Woodward, waxay ku dalbadeen in xaaladda Somaliya si dhaw loo soo farageliyo si loo hubiyo in si deg-deg ah loo qabto do ora shooyinka baarlamaan ka iyo madaxweynaha. Musharrixiinta qoraalka diray oo gaaray 15 ayaa ku eedeeyay madaxw eynaha mudda xileedkiisu dhamaaday iyo xula fadiisa maamulka inay diideen ka shaqeynta fu dudeynta doorashooyin xor iyo xalaal ah.
Waxay ka digeen haddii Golaha Amnigu uus an fara gelin xalaadda dalka uu Farmaajo sii wa di doono carqaladeynta dadaallada lagu doona yo geeddi-socod doorasho oo dimuqraadi ah.
Waxay warqaddooda ku sheegeen in xiisad da siyaasadeed ee hadda jirta oo khatar ku ah xasilloonida Soomaaliya ay ka dhalatay Siyaas ada Farmaajo ee lagu bartilmaameedsanayo Do wladaha xubinta ka ah Federaalka iyo kuwa siy aasad ahaan kasoo horjeedda, oo ay weheliso fi cilkiisa ula kaca ah ee sida joogtada ah dib loo gu dhigo doorashooyinka si loo raadiyo muddo kordhin sharci darro ah ama awood lagu qabsa do qaab militari.
Waxay codsadeen in Farmaajo lagu qasbo in uu joojiyo dhammaan faragelinta lagu hayo howl aha doorashada iyo inuu xilka ku wareejiyo gole kmg ah oo qaran oo ka kooban Madaxweynay aasha D/G/yada iyo guddoomiyaasha Aqalka Hoose iyo golaha shacabka.
"Waxaa burburay kalsoonidii siyaasadeed ee Soomaaliya, maxaa yeelay waxaan markhaati ka nahay dadaal nidaamsan oo uu Farmaajo ku doonayay inuu ku majaxaabiyo dimuqraadiyad da, una adeegsado xoogag milatari si uu sharci darro xafiiska ugu sii joogo,” ayaa lagu yiri qo raalka.
Waxay sidoo kale sheegeen in Febaraayo 18-19 ay ciidamada dowladda federaalka oo ka amar qaadanaya Farmaajo ay isku dayeen dilka dhowr murashax madaxweyne iyo hogaamiyaa sha mucaaradka, sida ay hadalka u dhigeen, ay na rasaas ku fureen iyaga iyo dibadbaxayaal kale oo si nabad ah isugu soo baxay magaalada Muqdisho si ay u dalbadaan doorasho deg deg ah, ayna sidoo kale Hotelka Ma’ida ku weerar een seddex musharax.
"Ficilladaan gardarrada ah ma ah kaliya shar ci darro iyo anshax xumo, laakiin waxay horuma riyaan dhaqanka Farmaajo ee caburinta xuquuq da dadka Soomaaliyeed ee ah inay hadlaan oo ay si xor ah isu soo baxaan, arrintaas oo si aad ah u wiiqaysa rajada laga qabo doorasho xor iyo xalaal ah,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Waxay sidoo kale ku eedeeyeen Farmaajo in uu Muqdisho ku urursaday ciidamadii xooga dal ka Soomaaliyeed ee la filaayay inay la dagaall amaan Al-Shabaab, si ay weeraro cusub ugu qa adaan guryaha ay degan yihiin musharixiinta u tagan xilka madaxweynenimo una laayaan mu sharixiinta iyo hoggaamiyeyaasha kale ee siya asadeed.
Qoraalka ayaa lagu yiri "Midawga Murashixiin ta waxay si xushmad leh uga codsanayaan Gol aha Ammaanka inuu qaado tallaabo deg deg ah oo lagu baarayo xasuuqyada uu geystey Madax weynaha sharciyaddu ka dhamaatay si cadaa ladda loo horkeeno kuwa ka masuulka ah dhiba atadii dhacday. Waxaa kale oo ay codsadeen in ficil si deg deg ah loo sameeyo si looga hortago dadaalada sharci darada ah ee taliska waqtigii su dhamaaday ee ah inuu xukunka ku dhegan aado, iyo in la hubiyo doorashooyin xor iyo xal aal ah todobaadyada soo socda.”
Qoraalka loo diray Madaxweynaha Golaha Amniga ee QM,Marwo Dame Barbara Woodwa rd ayaa sidoo kale la ogeysiiyay Xoghayaha Gu ud ee QM, Antonio Guterres, Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony J. Blink en,Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, Mo ussa Faki Mahamet, Wakiilka Sare ee Midowga Yurub ee Arrimaha Dibadda iyo Siyaasadda Am niga ahna Madaxweyne ku-xigeenka Guddiga Yurub,Josep Borrell Fontelles, Wakiilka Midow ga Afrika ee Nabadda iyo Amniga Danjire Smail Chergui, Xoghayaha Fulinta IGAD Dr. Workneh Gebeyehu, Xoghayaha guud ee OIC Dr. Yousef Bin Ahmad Bin Abdul Rahman, iyo Xoghayaha Guud ee J/Carabta, Axmed Aboul-Gheit.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sha acisay Kiisaskii ugu dambeeyay ee Caabuqa Covid19 ee lag helay guud ahaan dalka.
W/Caafimaadka XFS waxaa ay she egtay in 24 saac ee ugu dambaysay laga baaray COVID-19 guud ahaan wadanka 936 qof, waxaana kiisaka laga helay Gobolka Banaadir iyo Qaar ka mdi ah Maamul Goboleedyada dalka.
Tirada 24 saac ee ugu dambaysay laga baaray COVID-19 guud ahaan wadanka: 936
– Laga Helay: 128,– Banadir: 110,– Jubaland: 8,– Somaliland: 6,– Southwest: 3,– Galmudug: 1,– Lab: 75,– Dhedig: 53.– Dhimasho: 8,– Bo gsashada: 7,– Tirada Guud ee Laga Helay: 6,017,–Bogsashada Guud: 3,764,– Dhimashada Guud: 202
Wasiir Dubbe "Imaaraadka Carabta wuxuu Somaliya ka rabaa sida Liibiya iyo Yemen”
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay Qoraalkii Dorraad kasoo bax ay dowladda Imaaraadka Carabta ee dowlad KMG ah ugu yeertay DFS, xili ay ka hadleysay rabshadi hii ka dhacay Magaalada Mu qdisho.
Wasiirka Warfaafinta XFS Ci smaan Abuukar Dubbe oo shir jaraa’id u qabtay warbaahinta ayaa waxaa uu marka hore sheegay in DF iyo Imaaraad ka uu ka dhexee yay xiriir wanaagsan oo ku saleysan ganacsi.
Waxaa uu sheegay in dowladda ay kasoo xu maatay hadalkii Imaaraadka ee dowladda ugu gaftay ee ahaa in dowlad KMG ugu yeertay So malia oo ay ku sheegtay in aysan aqoonsaneyn, uuna lamid yahay hadalkii dhawaan Muqdisho laga sheegay ee ahaa in dalka aysan dowlad ka jirin.
Imaaraadka ayuu sheegay Wasiirka inay do onayaan in Soomaaliya lamid noqoto dalalka Lii biya iyo Yemen, isla markaana ay rabto in dalka ay abuurto barakac iyo dib u dhac, taasina ay ta hay mid dadka Soomaaliyeed ka feejigan yihiin.
Isaga oo sii hadlaayay ayuu Dubbe sheegay in markii la saxiixay heshiiskii 17 September qaar kamid ah Madaxda dowlad Goboleedyada ay tageen Imaaraadka ayna ka kulmeen Madax ka tirsan dalkaas, kadibna dalka ay kusoo laabte en, iyaga oo wata shuruudo cusub, ayna arrant aas kamid tahay faragelinta lagu haayo heshiis kii doorashada.
Ugu dambeyn Wasiirka Warfaafinta XFS ay aa Carrabka ku dhuftay in dowladda ay ka dal batay Imaaraadka Carabta inay cudur daar ka bixiso Qoraalkii ay DFS ugu yeertay KMG, ayna gef ka gashay Qarannimada Soomaaliya.
Farmaajo oo shir la qaatay Madaxda maa mulada taageersan
Md.Maxamed C/hi Farmaajo Madaxweynaha waqtigiiso dhamaaday ayaa guddoomiyey Shal ay Kulan hordhac u ah Shirka Wadatashiga Qa ran ee ku saabsan dhaqan-gelinta talo-soo jeedi ntii Guddi ga Farsamada Arrimaha Doorashoo yinka Fede raalka. Kulanka waxaa ka soo qeyb galay R/Wa saaraha XFS Md.Maxamed Xuseen Rooble, Ma daxweynayaasha
D/G/yada Galmud ug, Md. Ax med Cabdi Kaariye, K/galbeed Md.Cabdic asiis Xasan Max am ed iyo Hirshabeelle Md.Cali C/hi Xuseen iyo G/G/Banaadir Md. Cumar M.Max amed.
Farmaajo ayaa tilmaamay in shaqada Gudd iga ay aas-aas u tahay xal u helidda caqabad aha soo wajahay fulinta Heshiiska 17-ka Sebte embar .
Madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaanan shirka qeyb galin, iyadoo Madaxweynaha Jubbaland uu shuruud ku xiray inuu yimaado Muqdisho si uu shirkaas uga qeyb galo.
Maxkamadda Sare Ee Dalka Oo Soo Saar tay Amaro Looga Hortegayo COVID-19
Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka Md.Baashe Yuusuf Axmed ayaa sooo saaray go ’aano la xariira xakameynta faafitaanka Cudurka halista ah COVID-19 ee la xariira hannaanka shaqada ee hey’adaha garsoorka dalka.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska G/ye Baashe Yuusuf ayaa waxaa dhammaaday howlwa-deen ada Garsoorka, Ciidamada Ammaanka Qareen ada iyo shacabka Cadaalada u soo doonta Gar soorka la faray inay xirtaan afka, isla markaana kala fogaadan.
Ciidamada ilaaliya amniga Hay’a ddaha Gar soorka ayaa waxaa la fa ray in X/ha Hay’adda uusan soo geli karin qof aan afka u xirneyn, uuna soo geli karo oo kaliya qof wata Fa ce-Mas k oo dacwadiisa mudeysan tahay.
Sidoo kale Qoraalka G/ye Baashe ayaa wa xaa lagu sheegay in la joojiyay dacwadihii lagu dhageysan jiray xafiisyada Garsoorayaasha, i sla markaana lagu dhageysato qolalka loogu ta la-galay.
Hoos ka Akhriso Qoraalka kasoo baxay Guddoomiye Baashe.
Qarax Labaad Oo Shalay Ka Dhacay Muqdisho Iyo Faah Faahin Kasoo Baxeysa
Duhurnimadii Shalay Qarax miino oo dhulka la geliyay ayaa waxaa uu ka dhacay inta u dhe xeeysa isgoyska Tarabuunka iyo Isbitaalka Dif eer gaar ahaan halka loo yaqaano qaruuraha Qaranka ee D/Hodan ee G/Banaadir. Dad Goo bjoogayaal ah oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in xiligii uu qaraxu ka dhacayay ay wa ddada marayeen gaadiid ay la socdeen Ciidano ka tirsan kuwa Booliska, isla markaana mar qu ra la maqlay jugta qaraxaas. Inta la xaqiijiyay 4 ruux ayaa ku dhaawacmay qaraxaas Shalay ka dhacay D/Hodan, kuwaasi oo gaadiidka gurm adka deg dega ah goobta loo ga qaaday, iyagoo la geeyay Xarumo Caafima ad, si loogu daawe yo. Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska oo ku sug naa meel aan sidaas uga fogeyn goobta ayaa te gay halka uu qaraxu ka dhacay, isla ma rkaana xiray aaga oo dhan, kadibna sameeyay howlgal miino baaris ah.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Ciidanka Booliska dowladda ay sameeyeen howlgal baar itaano ah, iyagoona kusoo qabtay dad u badan dhalinyaro, kuwaasi oo la geeyay Saldhig ay lee yihiin Ciidanka, ayna ku socdaan baaritaano.
Qaraxaas ka dhacay D/Hodan ee G/Banaadir ayaa waxaa kusoo aadayaa, iyadoo barqdii Shalay qarax uu ka dhacay D/Hiliwaa, isla mar kaana lala eegtay Mas’uul ka tirsan deeegaanka Daaru-salaan ee Muqdisho, balse uu ka badb aaday.
Kenya oo qaaday tallaabo cusub oo la xiriirka kiiska dacwada badda Soomaaliya
D /Kenya oo dhowaan ku guul darreysatay da labkeedii ahaa in dib loogu dhigo dacwadda ba dda ee kala dhexeysa Soomaaliya ayaa haatan bedashay dhammaan qare enadeedii dacwadda bad da ee taal maxakamada ICJ. Xukuumadda Nairobi ayaa soo xulatay illaa 8 qareen oo cusub, kuwa as oo 7 ka mid ah ay yihiin Ajaaniib ah, halka xubinta 8-aad ay tahay haweeney Kenyaan ah.
Dhammaan qareenadan ayaa ah kuwa caala mi ah oo leh qibrad sare, islamarkaana kasoo shaqeeyey xarumo kala duwan & jaamacado, waxaana hoggaaminaya nin lagu magacaabo Prof Sean Murphy oo uu weheliyo qareen kale oo la yiraahod Tullion Treves.
Halkan hoose ka aqriso magacyada:-
1: Hoggaamiyaha qareenada oo lagu Magaca abo Prof Sean Murphy oo ka tirsan George Wa shington School of Law,
2: Garsoore hore iyo ba re Culuumta Sharciga ka dhiga dalka Ingiriiska Tullion Treves.,
3: Prof Laurence Boisson De Chazournes oo is na khab iir ku ah sharciga caal amiga kana soc da jaamacadda Geneva ee dalka,
4: Prof Phoebe Okowa, oo bare ka ah Sharciga Caalamiga ee Jaamacadda Queen Mary ee Lo ndon ayaa ah qofka kaliya ee Kenyanka ah, wa xaana ay qeyb ka aheyd dacwada badda ee Gambia ka gudbisay Myanmar,
5: Prof Makane Mbengue, oo reer Senegal ah, oo ka dhiga sharciga caalamiga ah Jaamacad da Geneva.,
6: Sidoo kale waxaa kooxda ka mid ah Prof Ma kane Mbengue, oo reer Senegal ah, oo dhiga sharciga caalamiga ah ee J/cadda Geneva.,
7: Christian Tams, oo bare ka ah Jaamacadda Gasglow. Waa Muwaadinad Jarmal ah, iyada oo dhowr jeer ka soo muuqatay isla maxkama da kiisas kala duwan iyo 8: Eran Sthoeger oo la ga keenay Israel, waxaana uu ka qeyb qaatay kiisas u dhaxeeyay dalalka Peru & Chile .Xub naha ay Kenya soo xulatay sidoo kale waxaa ka mid ah madaxweynaha Nuqulada Juquraafiga Coalter Lathrop, kaas oo qareenada u fidin do ono caawimaad dheeri ah. Si kastaba arrintan ayaa kusoo aadeyso, iya da oo haatan wax ka yar bil ay ka harsan tahay dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya kala dhexeysa Kenya.
Mareykanka: "Dal-na uma adeegsan karo COVID-19 inuu ku xadgudbo xoriyadaha aasaasiga ah”
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykan ka Anthony Blinken ayaa sheegay inaan waddanna loo oggolaanin inuu xanunka Covid-19 u adeegsado inuu ku xadgudbo xuquuqda aadanaha iyo xorriyadaha aasaasiga ah.
Blinken waxa uu hadalkan u jeed iyey shir ku saabsan Covid-19 iyo tallaalka oo uu yeeshay Golaha A mmaanka ee QM.17-kii bishan Fe braayo.
Blinken ma magacaabin waddan gaar ah ma rkii uu hadalkaasi jeedinayey, waxaase uu ku ba aqay in waddamada lagula xisaa btamo waajibaadka ka saaran ila alinta xuquuqda aadanaha.
Dawlada Soomaaliya ayaa isla maalinta uu hadalkaasi jeediyey waxay soo saartay amar ay ku joojinayso isku soo baxyada iyo in la isku yi maado iyadoo sheegtay inay tal laabadaas u qa adday ka hortagga faafidda Covid-19 darteed. Ma cadda in hadalka Blinken uu ku socday So omaaliya.
Tallaabada ay qaadday DFS ayaa timid 2maal mood ka hor markii uu dhici lahaa bannaan bax yo ay ku baaqeen mucaaradka oo ku beegnaa 19-ka Febraayo, kaasi oo gacan ka hadal ka dhashay iyadoo dhinacba kan kale u uku eedee yey inuu soo weeraray.
Dhinaca kale, Xoghayaha Arrimaha Dibedda Maraykanka Anthony Blinken waxa uu sheegay inay muhiim tahay in caalamku uu si wadajir ah uga hortago kana guulaysto Covid-19, iyo cud urro kale oo faafa oo mustaqbalka yimaada. Bli nken waxa uu sheegay in Maraykanku ay 20-kii sano ee lasoo dhaafay ku bixiyeen lacag dhan 140 Bilyan oo dollar gargaarrada caafimaadka dunida.
Waxa uu Blinken sheegay in dhamaadka bish an ay Maraykanku siin doonaan Hay’ada Caafi maadka Adduunka ee WHO lacag dhan 200 Mil yan oo dollar oo ah waajibkii kusoo aaday Mar aykanka. Waxa uu ugu baaqay dhammaan wad damada inay la dagaalamanaan dacaayadaha aan jirin eel aga faafiyo tallaalka, waxaana uu sheegay in haddii aan taas la samaynin la boq ongoynayo hadafkii la lahaa. Isha: VOA
Askari ka tirsan ciidanka DF oo Bajaajle ku dilay Muqdisho
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxa ya dil uu Shalay askari ka tirsan ciidamada dow ladda ka geystay M/Muqdisho. Dilka oo loo geys tay wade Mooto Bajaajle ahaa ayaa ka dhacay agagaarka isgoyska Black Sea, sida ay inoo xa qiijiyeen ilo dadka deegaanka ah.
Wararka ayaa sheegaya in dilka uu yimid, ka dib markii wadaha mootada uu ka biyo diiday in uu qaado askariga, kadibna uu sidaas rasaas ugu furay marxuumka
Sidoo kale wararka ayaa in taasi kusii daraya in Askarigii ka dambeeyey fal kaasi dilka ah uu goobta isaga baxsaday dhac dada ka dib.
Marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Xaashi Cumar Carrabey, iyada oo ehelladiisa ay geeyeen xarunta dambi baarista ee CID-da.
Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sid oo kale goobta gaaray, kuwaas oo sameeyey b aaritaano kooban, walow aysan gacanta kusoo dhigin askarigii dilka geystay.
Inta badan askarta dowladda ee ku sugan M/ Muqdisho ayaa dilal bareer ah u geysta dhalin yarada ku shaqeysata mootooyinka nooca loo
Allah ha u naxariistee waxa M/Muqdisho ku geeriyootay hoobalkii can ka ahayd, Faadumo Cali Jaamac (ma), oo ka mid ahaan jiray koox dii Waaberi. Nakruma waxa ku dhacay cudurka Covid-19 oo loo dhigay Isbitaalka Martini ee magaalad Muqdisho oo ay Shalayna u geeriyootay.
Markii ay dagaalladii sokeeye ee Soomaaliya ka socday gaadheen M/ caasimadda 1991, ee ay dhacday dawladdii dalka ka talinaysay, waxay Faadumo u qaxday dalka dibadiisa oo waxay qurbaha ku noolayd muddo dheer, waxayse dalka dib ugu noqotay sannadkii 2018 oo waxay degan ayd magaalada Muqdisho tan iyo waagaa.
Nakruuma waxay ku dhalatay magaalada Dhuusamareeb halkaas oo ay waxbarashada aasaasiga ah ee ho ose ku soo qaadatay. Ka dib waxay la geeyey magaalada Xamar oo aabah eed deganaa waxaanay waxbarashad a dugsiga dhexe ka bilowday dugsiga Xamar Jajab. Ka dib waxay tacliintee da ka sii wadatay Iskoole Komerjaale.
30 sano ka dib rididdii dowladdii kaca anka maxay Soomaaliya ka dhaxa shay?
"Iskoole Komerjaale anigoo dhigta ayaa waxa la soo dhejiyey in la qorayo askar. Itixaankii baan galay, aniga aab ahay iima ogolayn askar. Oday adeer kay ah oo aabahay ay xagga hooyo ka walaalo ahaayeen, Cabdirisaaq Xaaji Xuseen, ayaan intaan gurigiisa irridiisa u fadhiistay ayaan idhi hooy adayna ma joogto aabahayna naag kale ayuu qabaa iskoolkaygiina waan dhamaystay, adeeroow waxaan rabaa inaan askar galo xaashi waxaan ku qortona ma haysto. Markaas ayuu wuxuu igu yidhi adeeray ilaa jam acad aad ka dhamaynaysid anaa kaa bixinayee joog. Mayee horta askar aan galo. Boqol doolar buu i siiyey beledkaan tagay waxaan soo qaatay wixii la iska rabay oo dhan, waxaan galay itixaankii askarta waa la i qa atay." Ayay tidhi Nakruuma oo ka waramaysay sidii ay ku gashay ciid amada.
Faadumo Cali oo ka waramaysay sida uu ugu baxay magaca naanays ta u noqday ee Nakruuma, ayaa waxay sheegtay inuu magacaa u bixiyey Kornayl Masri ahaa oo ka mid ahaa macalimiintii dibadda looga keenay in ay tabobaraan hablihii ay ka midka ahayd ee loo qaatay askarinimada.
"Aniga waxa la iga keenay Ghana, hadii aad jaamacadahaaga dham aysan lahayd sida Kwame Nkrumah ayaad dibloomooyin badan lahaan la hayd, berkee you are very clever. Gabdhihii baa intay qosqosleen waxay dhaheen naayaa madowga ayuu kuu yidhi. Ninkii baa intuu dersi qoray markuu subaxii yimid wuxu yidhi 'feeyn Nkrumah" markaasaan ana oohin balalaq iga tidhi. Sidii baa markaas Nakruuma iiga hadhi wayday." Ayey tidhi.Qoraalka Codka,
Faadumo Cali Nakruuma oo 27 sano kaddib ku laabatay Muqdisho
Waxay sheegtay in burburka dhacay ka sokow iyo dhibaatooyinkii dal ka ka jiray markii la qaxayey ay dareentay in isbedello togani dalka ka soc deen.
Markii ay Xamar gaadhay ba waxay maalmo gudahood ku tagtay goo bo nolosheeda iyo taariikhdeeda faneed ba saamayn gaara ku lahaa. Waxaana ka mid ahaa goobahaas ay tagtay xarunta idaacadda Raadyow Muqdisho iyo Tiyaatarka Xamar.
"Meesha keliya oo aan ka naxsanahay oo aan ku ooyey tiyaayarkii bay ahayd. Golaha keliya ee aan iskugu nimaadno ee caanka ah oo nalaku yaqaano, rugtii fanaaniinta ee habeenkay kaa jajabto xataa subaxii baa intaad iska timaadid baa waxa kaa dhacaaya jajabka iyo oohintii Habeen hore iyo waxoogaagii istereeskii aad qaaday. Meeshii aan ku farxi jirnay markii aan iskugu nimaadno aad bay u foolxuntahay waxaanan rajayna yaa inay qurux badnaato, dawladda Soomaaliyeedna waxaan ka barya yaa in la dhi so tiyaatarka iyo agagaarkiisii si noloshii kolba soo noqotaa ay u dhabo wdo." Ayey tidhi Faadumo oo markaa waraysi siinaysay Laan ta Af-Soomaaliga ee BBC-da.
Muddo dheer ayay ku soo jirt ay hawlaha fanka Soomaalida, waxaanay ka tirsanayd markii da mbe kooxdii Waaberi oo ay ka mid ahayd hablaha horseedka u ahaa fanka.
Heeso badan ayay keli u qaad ay iyo kuwo kale oo ay talaltaali u wada qaadeen hooballadii kale ee ka tirsanaa kooxdaas. Sidoo kale waxay Faadumo doorar waa weyn ku lahayd oo ay wax ka me tashay riwaayado badan oo ay hal abuurkii ugu magaca dheeraa dalku curiyeen.
Ragga fanaaniinta ah ee ay soo wada shaqeeyeen, ilaa haatanna ay magaalada Muqdisho wada joogeen intii aanay geeriyoon waxa ka mid ah hoobalka weyn, Maxamed Xasan Barrow, oo wax yar uun ka dib mar kii ay geeriyootay Nakruuma BBC-du la xidhiidhay, waxaanu sheegay in ay ahayd qof qaayo iyo magac ba ku lahayd fanka oo aan la ilaawi karin kaalintii ay ku lahayd koboca fanka Soomaalida.
"Qof muwaadinada ayay ahayd oo heeso badanoo wadaniya qaaday. Waxaa lagu xasuusan doonaa in ay qof muwaadina oo wadaniyada ah ayd oo in dawlad la helo uun ay ka go'nayd taasaa lagu xasuusan doo naa. Fanaaniinta Waaberina tiir wayn baa ka jabay run ahaantii, intay noo timid wax tar badan bay noo qabatay oo isku keenista ah oo midnimada ah waxyaabo badan bay anaga nagala shaqayn jirtay Ilaahay ha u naxa riistee." Ayuu yidhi Barrow.
Sidaa uu sheegay Maxamed Xasan Barrow, Allah ha u naxariistee Fa adumo xataa haatan oo ay waayeel ahayd ba kama ay fadhiisan hawlaha fanka iyo isku dumidda dadkiisaba. Talo iyo tilmaan toona kalama ay masuugi jirin jiilkan dambe cidii ka mid ah ee toosin waydiisata.
Mar la weydiiyey bal hadda in Soomaalidu ay mar kale arki doonto fan kii waayo waayo ee wakhtigoodii oo dadku ku tilamaanaan waayadii dah abiga ahaa iyo in kale ayaa waxay ku jawaabtay:
"Ma soo marayo" waxay se intaa ku dartay oo tidhi iyada oo dadka iyo dawladdaba ku tirtirsiyeysa in la daryeelo fanka iyo fanaaniinta "waxaan dadweynaha Soomaaliyeed u sheegayaa iyo dawladdaba wallaahi had aan fanaaniinta la qiimayn, fanaaniinta iyagaa wacyi gelin samayn jiray hanuuniyeyaasha dalkay ahaayeen wayna yihiin ilaa hadda laakiin ha daan la daryeelin wallaahi inaan dawladdu daryeelmayn, taasaan fara yaa. Dadweynahana waxaan leeyahay fanaaniintiina soo dhaweeya, daw ladna fanaaniinta daryeela ka jirran caafimaad u raadsha tiyaatarka u dhisa.XIGASHO:-BBC.”
Ciidanka Puntland Oo Howlgalo Ka Sameey Ay Deegaano Buuraley Ah
Ciidanka ammaanka D/G/Puntland ee PSF ayaa saacadihii lasoo dhaa fay waxaa ay howl gal qorsheysan ka sameeyeen deegaano buul ey ah oo ka tirsan G Bari ee Maamul kaas. Howlgalka Ciidamada Puntland ayaa waxaa uu ujeedkiisu ahaa mid looga hortegayay miino oyinka Al-shaba ab, xiliyada qaarkood geliyaan waddooyinka u dhexeeya deegaanada kala ah Sugure, Balikha dar iyo Galgala. Taliska Ciidanka PSF oo ka ha dlay howlgalka ayaa sheegay in Ciidamada ay macluumaad ka heleen deegaanada howlgalka laga uliyay, isla markaana ay doonayaan inay ka hortegayaan falalka amni darro ee halkaas ka dha ca.
Sidoo kale Ciidamada ayaa howlgal kale oo amniga lagu xaqiijiayay ka sameeyay deegaana da Ceel Kharaar, Dameer,Ceel Cadayle iyo Xa mur ee Buuraha Cal Madow ee Gobolka Bari, maadaama deegaan ka tir san halkaas ay ku su gan yihiin xubno ka tirsan Al-shabaab iyo Daac ish. Inta badan Ciidanka ammaanka D/G/Puntl and ayaa howlgalo kala duw an ka sameeya dee gaano ka tirsan Gobolka Bari, waxaana ay ku soo qabteen xubno ka tirsan Al-shabaab iyo Daacish iyo hub.
Vacancy code VA/2021/B5001/21260
Education A First level university degree (Bachelor’s degree or e...